အကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီ အလုပ်နေရာ ၁၀၀ စာရင်းကို ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ရန် အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်း ၁၀၀
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သင့်အနေဖြင့် အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသည့် အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ အမည်ကို မဲပေး ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နေသော အတတ်ပညာရှင် ဝန်ထမ်းများ၏ အဆိုပြုချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ယခု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပြုစုထားပါသည်။
ရွေးချယ်ခံရ‌သော ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ အားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင် မဲပေးရွေးချယ်ထားသော မြန်မာ့အကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်း ၁၀၀ အကြောင်းကို ယခု အစီရင်ခံစာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျား/မ လူမှုရေးရာ အကြောင်း
စီမံ အုပ်ချုပ်မှု ရာထူးအဆင့်
အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသော အဆင့်
သည် လက်ရှိအလုပ်ရှင် အပေါ် စိတ်ကျေနပ်ကြသည်။
သည် အလုပ်ရှင်၏ တန်ဖိုးထားမှုကို ခံကြရသည်။
သည် လက်ရှိ အလုပ်ရှင် အပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိကြပါ။
သည် လက်ရှိ အလုပ်ရှင်ကို ထောက်ခံ အားပေးကြသည်။
သည် ထွေထူး မှတ်ချက် မပြုပါ။
သည် လက်ရှိ အလုပ်ရှာဖွေနေကြသည်။
သည် နောက် ၁-၂ နှစ်တွင် အလုပ်ပြောင်းရန် ဆန္ဒရှိကြသည်။
သည် နောင် ၅ နှစ် အထိ လက်ရှိအလုပ်တွင် ဆက်ရှိရန် ရည်ရွယ်ထားကြသည်။
သည် လက်ရှိအလုပ်မှ ပြောင်းရန် ဆန္ဒမရှိကြပါ။
အောက်ပါ အချက်များသည် အနာဂတ်အလုပ်ရှင်များအတွက် အရေးကြီးသော အချက်များ ဖြစ်သည်။
၁။ ကုမ္ပဏီ၏ တန်ဖိုးထားမှုများနှင့် ကိုက်ညီမှု
၂။ လေ့လာသင်ယူမှုနှင့် အတတ်ပညာ သင်တန်းများ
၃။ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု
၄။ ကောင်းမွန်သော အလုပ်ဘ၀ ဟန်ချက်ကျမှု
မြန်မာ့ အကောင်းဆုံး အလုပ်အကိုင် နေရာ ၁၀၀
ဘဏ် ၊ ငွေကြေး နှင့် အာမခံ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း
Max Myanmar Group သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး လေးစားဖွယ် ခေါင်းဆောင်မှု၊ တည်ထွင်နိုင်စွမ်း၊ စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကြောင့် ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသည်။
ရရှိနိုင်​​သောအလုပ် ဤ​နေရာတွင် မရှိပါ
ဘဏ် ၊ ငွေကြေးနှင့် အာမခံ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း
KBZ မိသားစုဝင်အသစ်အနေနှင့် အလုပ်က များစွာသော ထောက်ပံ့မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။
ပေးထားသော ၀န်ထမ်းအကျိုးခံစားခွင့်အစီအစဉ်များက ကောင်းမွန်တယ်။
ကျွန်ုပ်အသင်းရှိ ယူနစ်တိုင်းသည် အဖွဲ့အစည်း၏အမြတ်အစွန်းများကို တတ်နိုင်သလောက်ရရှိရန် ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်။ ဒီတော့ ဒီမှာရှိနေတာနဲ့ KBZ မှာ အလုပ်လုပ်ရတာကို အရမ်းကိုဂုဏ်ယူတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သမာဓိရှိခြင်းနှင့်ကျင့် ၀တ်တရားမျှတသောစီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဦး ဆောင်ခြင်းဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းဖန်တီးများကို ပြုလုပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးအလုပ်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်တယ်
ကျနော်တို့တွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုအတွက် ရှင်းလင်းသော လမ်းကြောင်းရှိတယ်
အိုင်တီနည်းပညာ နှင့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း
ဝန်ထမ်းတွေသည် ကျွနိုပ်တို့၏ တန်ဖိုးအရှိဆုံး ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည့်အတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို အူရီဒူးမြန်မာမှာ ပထမဆုံး ဦးစားပေးနေရာမှာ ထားရှိပါသည်။
ဧရာဝတီဘဏ်သည် AYA Financial Group အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး AYA SOMPO၊ AYA Trust တို့ဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုဆောင်ရွက်နေသည့်မြန်မာနိုင်ငံ၏နည်းပညာအခြေပြုထိပ်တန်းဘဏ်ဖြစ် သည်။
လုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှုအတွက် အလားအလာ များစွာ ရှိတယ်
Unilever သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ကျော်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၄၀၀ ခန့်ကိုရောင်းချလျက်ရှိသည်။
DKSH သည်အာရှစျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေး ၀န်ဆောင်မှုပေးပြီး အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကို စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အခြားကဏ္ဍာများတွင်ပါ တိုးတက်စေရန်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
လက်ရှိ အလုပ်များ ကြည့်ရန်
DKSH ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျွန်တော် တကယ်သဘောကျတယ်။
DKSH သည် သင်ယူစရာ သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုနှင့်တူသောကြောင့် ဘွဲ့ရလူငယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် DKSH တွင် အလုပ်ဝင်လုပ်သင့်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်အလွန်အထောက်အကူပြုပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန် သင်ယူနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် စီမံခန့်ခွဲမှုကို ကိုယ်တိုင်မန်နေဂျာထံသတင်းပို့ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစီမံခြင်းကဲ့သို့ အတွေ့အကြုံတွေ ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများမှာယူခြင်းမှ ကုန်ပစ္စည်းများဖောက်သည်များထံပေးပို့ခြင်းအထိ ၀န်ဆောင်မှုများပေးရသည့်အတွက် များစွာသော အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကို အလုပ်မှ ရရှိပါသည်
နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကျော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို MPT မှုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုအကျယ်ပြန့်ဆုံးမိုဘိုင်းကွန်ရက် ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်လွှမ်းခြုံထားသည်။
အလုပ်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ နဲ့ အားထုတ်မှုတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်။
ရွှေတောင်စီးပွားရေးအဖွဲ့ အစည်းက ဝန်ထမ်းတွေကိုဂရုစိုက်တယ်
သူတို့မှာ ၀န်ထမ်းတွေဆက်ခံဖို့ ကြိုတင် အစီအစဉ်ရှိတယ်
Mytel သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးမိုဘိုင်းကွန်ယက်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြစ်သော 4G ဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကို လွှမ်းခြုံထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရာထူးအဆင့်တိုင်းက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လေးစားကြတယ်
Mytel သည်ကုမ္ပဏီကောင်း ဖြစ်၍ အလုပ်လုပ်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘွဲ့ရကာစ လူငယ်များအတွက် အသိပညာ အတတ်ပညာ သင်ယူလို့ကောင်းတဲ့အဖြစ် လက်ခံလို့ရတယ်။
ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုမှ အလုပ်ရာထူးနေရာတစ်ခု ကို ရှာဖွေနေပါသလား ?
စာရင်းသွင်းပြီး အခမဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း အကောင့် ဖွင့်လိုက်ပါ။
အရည်အချင်းပြည့်မီသောအလုပ်ရှာဖွေသူများကို သင်၏ လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် ဖြည့်တင်းလိုပါသလား ?
အခမဲ့ အလုပ်ရှင် အကောင့် ကို ဖွင့်လိုက်ပါ
ဟိုတယ် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း
လွန်ခဲ့သည့် ၁၅နှစ်အတွင်း HTOO ခရီးသွားနဲ့ဟိုတည်လုပ်ငန်းသည်ခရီးသွားများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် brand9ခုအနက် Unique, Luxury, Premier & Affordable ဟူ၍ ဟိုတည်အမျိုးအစား ၄ခုကို ထူထောင်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ကုမ္ပဏီက Covid အကျပ်အတည်းကာလမှာတောင် ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုဂရုစိုက်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု သင်တန်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ဖို့လည်း စီစဉ်ထားပါတယ်။
ကျနော့်ကုမ္ပဏီကတော့ ၀န်ထမ်းတွေတွေ တိုးတက်မှုအတွက် ထောက်ပံ့မှုတွေအခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးပေးဖို့ ရေရှည်အစီအစဉ်ရှိတယ်။
Coca-Cola Pinya Beverages Myanmar Ltd
လုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်အချိန်မှစ၍ Toyota သည်၎င်း၏ Guiding Principles လမ်းညွှန်အခြေခံသဘောတရားများကို အသုံးပြုပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောမော်တော်ယာဉ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အပြင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဆက်မပြတ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအကျိုးပြုနိုင်ရန် အမြဲဆန်းသစ်တီထွင်နေပြီးအဆင့်အတန်းမြင့်မားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း
၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Mega Lifesciences အများပိုင်ကုမ္ပဏီသည်သန်းနှင့်ချီသောလူများအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ၊ ထိရောက်စွမ်းဆောင်မှု နှင့် ကမ္ဘာ့ အရည်အသွေးအဆင့် မီ ဆေးဝါးများကို တင်သွင်း ဖြန့်ချိလျက်ရှိသည်။
City Mart Holding Co. , Ltd. (CMHL) သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးလက်လီရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိတွင် ၀ န်ထမ်းပေါင်း ၆၈၀၀ ကျော်ရှိသည်။
AIA သည် အာရှပစိဖိတ်ဒေသရှိစျေးကွက် ၁၈ ခုတွင် လုပ်ဆာင်လျက်ရှိပြီး လွတ်လပ်သောလူသိရှင်ကြားစာရင်းသွင်းထားသည့် အာရှပစိဖိတ်အသက်အာမခံအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
CDSG သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏လေးစားမှုအခံရဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြစ်ရင်းကို ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကစတင်ခဲ့သောကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းငယ်တစ်ခုသို့ပြန်လည်ခြေရာခံနိုင်သည်။
UNသည် လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသက်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု၊ နိုင်ငံရေး၊ နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ်လူမှုရေးအဖွဲ့၀င်၊ နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ တခြားသော ပြည်သူတို့နှင့်ဆိုင်သော တာဝန်များအား ထမ်းဆောင်သည်။
Nestléသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ကတည်းကတည်ရှိပြီ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လေးစားတန်ဖိုးထားမှုသည် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရန်ခွန်အားများဖြစ်စေသည်။
Huawei သည် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ (ICT) အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် စမတ်စက်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် နိုင်ငံတကာ ရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
PTTEP သည် စက်မှုလုပ်ငန်းယခုနှင့်အနာဂတ်၌ရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများကြားတွင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောတိုးတက်မှုနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းအတွက်နည်းဗျူဟာအသစ်တစ်ခုကို ချဲ့ထွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Myanmar Brewery Limited (MBL) သည်ဘီယာထုတ်လုပ်သူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်ဘီယာအတွင်းစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်လျှော့ချရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အားစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။
CB Bankသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘဏ်ခွဲများ၊ ကိုယ်ပိုင်၀န်ဆောင်မှုစက်များနှင့်မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များပါသောအကြီးဆုံးဘဏ်ကွန်ယက်များပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
EAC သည်မြန်မာနိုင်ငံရှိ နေ့စဉ်စားကုန်များ လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုကြောင့်တိုင်းပြည်ပြင်ပရှိကုန်သွယ်မှုပုံစံသည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းသို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
HEINEKEN Myanmar သည်အရည်အသွေး၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ တာ ၀ န်ယူမှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ရိုးသားမှုကိုတန်ဖိုးထားသည်။
Samsung သည်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်နှင့် ၀ န်ထမ်းများအားလုံးအတွက်တင်းကြပ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျင့် ၀ တ်စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်ကတိပြုထားသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယခုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိမြို့နယ် ၄၇ ခုတွင် ၇၈ ခုကျော်ရှိသည့်ဘဏ်ခွဲများမှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည်။
အပတ်စဉ်သင်တန်းတွေကြောင့် အသိပညာတွေ ရပါတယ်။
လူတိုင်း ရရှိနိုင်ပြီး ပိုမိုသန့်စင်၊ ဈေးသက်သာ၊ စိတ်ချရသော စွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၀ တွင်တည်ရှိတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်းပေါင်း အယောက် ၁၀၀,၀၀၀ မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
Wave Money သည် တယ်လီနော်နှင့် ရိုးမဘဏ်မှ ပူးပေါင်း၍ သင့်ဖုန်းဖြင့် လွယ်ကူ၊ မြန်ဆန်၊ စိတ်ချရသော မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားသည်။
အကာင်းဆုံး အသင်းအဖွဲ့ ဖြစ်တယ်
Myint & Associates Co., Ltd ( M&A )
Myint & Associates Co., Ltd (M&A) သည် မြန်မာ့ပထမဆုံး ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုမ္ပဏီအဖြစ် ၁၉၈၉ ခုနစ်မှစပြီး ဆီနှင့် ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် စတင်ခဲ့သည်။
အလုပ်မှာ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးစီအတွက် တိုးတက်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်တွေ ရှိတယ်။
Suzuki Thilawa Motor Co.,Ltd
၂၀၁၃ ခုနစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Suzuki Myanmar Motor အား တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သီလဝါစက်ရုံတွင် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ခဲ့သည်။
မြန်မာအခြေစိုက် Asia World Company Ltd ("AWC") မှာ ၁၉၉၂ ခုနစ်တွင် စတင်ခဲ့သည့် ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ်တွင် အဓိကလုပ်ဆောင်ပြီး လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများစွာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစုဖြစ်သည်။
Super Seven Stars ၏အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုအချို့သည် KIA အတွက် တပ်ဆင်စက်ရုံနှင့်ခေတ်မီပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ကာ ၎င်းတို့သည် လုပ်ငန်းစုအတွင်းရှိအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အထောက်အပံ့ပြုသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လေးစားမှုနဲ့ တန်ဖိုးထားဆက်ဆံမှုဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ကောင်းမွန်သော အလုပ်ပတ်ဝန်ကျင်၊ မြင့်မားသော ကုမ္ပဏီ ပုံရိပ် ၊ မျှတသော လစာ နှင့် အထောက်အပံ့များ အလုပ်မှာ ရှိတယ်။
ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ Accor ၏ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိ Novotel Yangon Max အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ, သံရုံးများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ၁၀ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားနှင့် ၄ ကီလိုမီတာသာဝေးသည်။
လာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း Tokyo Olympics and Paralympics အတွက်အဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
JFE Meranti Myanmar Company Ltd
မြန်ဆန်စွာတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေသော မြန်မာ့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအား အရည်အသွေးမြင့်မားသော သံမဏိများထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် ထိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
A bank သည် အများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ၃/၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးဥပဒေအရ အတည်ပြုသည့်ခဲ့ကာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကျွန်တော်ကို အလုပ်မှာ တန်ဖိုးထား ဆက်ဆံခံရတယ်
BYMA သည်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်တာဖြစ်ပြီး၊ Dragages Singapore (Bouygues ဆောက်လုပ်ရေး၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ) နှင့် SPA Project Management (YOMA Strategic Holding ၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ) အကြားဖက်စပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
ဝန်ထမ်းများကို ပထမ ဦးစားပေးအဖြစ် ထားရှိတယ်
Marga Landmark Development Co., Ltd သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိမ်ခြံမြေတည်ဆောက်သည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိအဆင့်မြင့်လူနေအိမ်နှင့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောအိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုအဓိကထားသည်။
ကုမ္ပဏီက လိုအပ်တဲ့ အထောက်အပံ့တွေ အပြင အလုပ်တာဝန် တွေ တာဝန်ခံမှုတွေ ရှိတယ်။
အလုပ် ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် အကောင်းဆုံး အလုပ်ဖြစ် ပြီး ကြိုးစားသလောက် ခံစားခွင့် တွေ ပိုရတယ်
အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေ အတွက် အလုပ်က အကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီတွေ ထဲ က တစ်ခု ဖြစ်တယ်။
Ericsson သည် သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (ICT) ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်သူများထဲမှ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Myanmar Distribution Group (MDG) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြန့်ချီရေးကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်နေသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဖြန့်ချီရေးကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
Myanma Apex Bank Ltd (MAB) သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ပထမ ရုံးခန်းကို နေပြည်တော်၌ ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
AYA SOMPO ၏ ထူးခြားသောခြေလှမ်းမှာ သင်နှင့်အတူ သင်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေအားလုံး ယခုအတွက်သာမက နောင်အချိန်အတွက်ပါ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြင့် နေထိုင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
MyJobs သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ရာနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် MyJobs မှတဆင့်အကောင်းဆုံးဝန်ထမ်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
LOTTE HOTELS & RESORTS သည် သက်တောင့်သက်သာရှိသောအခန်းများနှင့်နွေးထွေးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ အစားအစာများနှင့်ခေတ်မီဟိုတယ်အဆောက်အအုံများသည်လည်း ဧည့်သည်များအားတမူထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများကိုပေးသည်။
လိုအပ်တဲ့ သင်တန်းတွေကို ပေးတယ်။ မပြေလည်မှုများအပေါ် မျှတစွာ ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်။
အလုပ်လုပ်ချိန်ကို လက်ခံနိုင်စဖွယ်ဖြစ်တယ်။ ဖန်တီးခွင့်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းသဘောက စိတ်ခေါ်မှုတွေကို အသင်းအဖွဲ့အားဖြင့် ကျော်လွှားနိုင်တယ်။
၂၃ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသော ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Grand Royal Group သည် စားသုံးသူများအားထူးခြားသောထုတ်ကုန်များနှင့်ထူးကဲသော ဝန်ဆောင်မှုများအားပေးအပ်ရန်အတွက်နာမည်ကောင်းရခဲ့သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး AA Medical Products Ltd. သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်ကြာအောင်ဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့သည်။
အလုပ်နဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေ ရခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူတယ်
ယနေ့ခေတ်တွင်ကလေးသူငယ်များသည်မြန်မာနိုင်ငံလူ ဦးရေ၏ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်တွင်ရှိပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နေချိန်တွင် ၄င်းတို့၏ဘဝအရည်အသွေးကို ဦးစားပေးသည်။
Serge Pun & Associates (SPA )
SPA အုပ်စုသည် Mr. Serge Pun @ U Theim Wai နှင့် မိသားစု၏ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
IGE Co. , Ltd ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်း၏အမွေအနှစ်ဖြစ်သည့် အောင်ရီဖြိုးကုမ္ပဏီလီမိတက် (AYP) ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
First Myanmar Investment Public Co. , Ltd. သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးသောအများပိုင်ကုမ္ပဏီများအနက်မှအစုရှယ်ယာပေါင်း ၈,၆၀၀ ကျော်ရှိသည့်အပြင် နှစ်ပေါင်း ၂၇ နှစ်အတွင်း အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိခဲ့သည်။
Pahtama Group Co. , Ltd သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နေ့စဉ်စားကုန်များ လုပ်ငန်း ကဏ္ဍတွင် အကြီးမားဆုံးနှင့် အလျင်အမြန်တိုးတက်နေသော ဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီများ အနက်မှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မရဲ့လက်ရှိအလုပ်အတွက် တကယ်ကို ၀မ်းသာပါတယ်။ သိချင်တာကို လေ့လာနိူင်တယ်။ အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရခဲ့တယ်။ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေးအခြေအနေလိုအပ်ချက်အရ ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကို ရှာချင်တယ်
ဟုတ်တယ် ခံစားရတယ်။ အလုပ်က တန်ဖိုးထားမှု၊ လုပ်နိုင်စွမ်းအင်နဲ့ အသိပညာတွေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးတယ်။
Mango Media Group Company Limited
ဖန်တီးမှု နှင့် ဒီဇိုင်း လုပ်ငန်း
Mango Group သည် Creative Agency ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း ဈေးကွက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ Campaign တွေကို အစဉ်အမြဲပြုလုပ်လေ့ရှိသော agency တစ်ခုဖြစ်သည်။
DHL International GmbH သည် ဂျာမန်ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ဂျာမန် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Deutsche Post DHL ၏ ဌာနခွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။
Carlsberg A / S သည်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၈၄၇ ခုနှစ်တွင် J. C. Jacobsen မှတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီ၏ဌာနချုပ်သည်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ ကိုပင်ဟေဂင်တွင်တည်ရှိသည်။
အာရှစိမ်းလန်းသောဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (AGD) သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၌တည်ထောင်သောအများပိုင်ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်တန်းတွေနဲ့ အတတ်ပညာတွေကို ရခဲ့တယ်
ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စုသည်တမူထူးခြားသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ပြုမှု ၅ ခုဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွင်းသာယာဝပြောမှုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ရေရှည်တည်တံ့သောဖြေရှင်းမှုအတွက်လုပ်ဆောင်နေသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကလေးများ၏အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေးပြီးအထိခိုက်လွယ်ဆုံးကလေးများကို ဦးစားပေးသည်။
ချီးကျူးတဲ့ အလေ့အထကောင်းတွေ ရှိတယ်
SATHAPANA လီမိတက်ကို ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလတွင် MARUHAN Investment Asia Pte မှတည်ထောင်ခဲ့သည်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅သန်းအရင်းအနှီးနှင့်အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ၂၀၁၅ ဇွန်လတွင်ယာယီလိုင်စင်ရရှိခဲ့သည်။
Mitsubishi Electric Myanmar (Peace Myanmar Electric Holding Co., Ltd.)
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော Peace Myanmar Electric Holding Co. , Ltd သည် Mitsubishi Electric မှထုတ်လုပ်သော HVAC ထုတ်ကုန်များနှင့်၎င်းတို့၏အပိုပစ္စည်းများကိုတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိသည်။
Makro သည်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များအား ကတိသစ္စာပြုထားသည်မှာ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းရရှိလာ‌အောင် ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်သောစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များစွာကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ကြော်ငြာ မီဒီယာ လုပ်ငန်း
Forever Group သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် မီဒီယာဖျော်ဖြေရေးအုပ်စုကြီးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးသောဂရပ်ဖစ်သင်တန်းစင်တာအဖြစ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Prudential Myanmar တွင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကွဲပြားခြားနား ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နယ်ပယ်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံစွာ အပ်နှံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် လူအများ၏ ယုံကြည်မှုကိို ရရှိပါသည်။
ကောင်းမွန်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနဲ့ အတူ လစာခံစားခွင့်ကောင်းတွေ ရှိတယ်
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအတွက် ကောင်းမွန်တယ်။
Penta-Ocean Construction Co., Ltd. Myanmar
Penta-Ocean Construction Co. , Ltd.သည်ဒေသခံမိတ်ဖက် Suntac အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်း and Construction Co. , Ltd. နှင့်အတူ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဇုန်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း၏အဆင့် (၁) ကိုသိသိသာသာပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံ များစွာ ရရှိခဲ့တယ် နည်းပညာသစ်များနဲ့ အကျိုးရလာဒ်များကို ရရှိခဲ့တယ် များကို ရရှိခဲ့တယ်။
Maersk Line Myanmar Co. Ltd
A.P. Moller - Maersk သည်ဘက်ပေါင်းစုံကွန်တိန်နာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး A.P. Moller Group ၏အုပ်စု၀ င်ဖြစ်သည်။
Hilton ဟိုတယ်များ နှင့် အပန်းဖြေနေရာများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးမားဆုံးသော ဟိုတယ်များတွင် တစ်ခု ပါဝင်ပြီး အသိအမှတ်ပြု အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ Hilton သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အပန်းဖြေ ခရီးသွားသူများအတွက် အဓိက နေရာကြီးများ၊ လေဆိပ်များ၊ စျေးဝယ်စင်တာများနှင့် ခရီးသွားနေရာများအနီးတွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ ကမ္ဘာအနှံ့ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
ZTE ကော်ပိုရေးရှင်းသည်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတွင်ကမ္ဘာ့တွင် ဦးဆောင်နေသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဟောင်ကောင်နှင့်ရှန်ကျန်းစတော့အိတ်ချိန်းများတွင် စာရင်းဝင်ထားသည်။
Shop ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးတောင်အာရှ၏အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းရဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ကျယ်ပြန့်သောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဒေတာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများဖြင့်တောင်အာရှရှိရှေ့ဆောင်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးစနစ်ကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
ကောင်းမွန်သော အသင်းအဖွဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုး ရှိတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မြှင့်မားသော နည်းပညာတွေ ရှိတယ်။
စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်နေသာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်
PwC Myanmar သည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးရန်ကူညီသည်။
အုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီများအားလုံးအတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များကိုဆောက်တည်ခြင်း၊ ရိုးသားမှု၊ ဝီရိယရှိမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမှု နှင့် စီးပွားရေးကျင့်သတ် သိက္ခာများ တည်ဆောက်ခြင်း များကို အခြေခံ တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။
အလုပ်ကနေ အသိပညာ အသစ် တွေ ရသလို ကျွန်တော်လည်း တခြားသူတွေကို ပြန်လည် မျှဝေဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ GGI သည်မြန်မာနိုင်ငံအာမခံတွင်အယုံကြည်ရဆုံးအမည်အဖြစ်နာမည်ရခဲ့သည်။
Deloitte တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များ၊ လူများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အရေးပါသောသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်စေရန်သင်ကဲ့သို့သောစွမ်းရည်များကိုအားပေးမြှင့်တင်ရန်ထူးထူးခြားခြားအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသည်။
UNOPS သည်ကုလသမဂ္ဂနှင့်၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကူညီမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဝန်ထမ်းတွေကို ပထမ ဦးစားအဖြစ် ထားပြီး လုံခြုံရေး နဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို အစဉ် သတိပြု စောင့်ရှောက်ပေးတယ်
Naing group of companies
ကုမ္ပဏီကို၎င်း၏အမှုဆောင်နာယက ဦး ကျော်နိုင် ဦး က ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်လွတ်လပ်သော ကန်ထရိုက်တာအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။
Awba သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသီးနှံကာကွယ်ရေး၊ သီးနှံအာဟာရနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောမျိုးစေ့များကိုအဓိကထားသောစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးထုတ်လုပ်သူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူဖြစ်သည်။
Kajima Myanmar Co.,Ltd
Kajima Corporation သည် ၂ဝ၁၇ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၁ရက်တွင်ပြုလုပ်သော မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အစည်းအဝေး ၁ဝ/၂ဝ၁၇ တွင် Kajima Yankin PPP Co.,Ltd အမည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိထားသည်။
UMG အုပ်စုများကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အရောင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း၏အဓိကမဏ္ဍိုင် လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂၆၀၀ ဖြင့် လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။
အခက်အခဲတွေ ကြုံလာတိုင်း ကြိုတင် အစီအမံများကြောင့် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်မယ် လို ယုံကြည်တယ်
Sedona Hotel သည်မြန်မာနိုင်ငံရှိအဆင့်မြင့်ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်တွင် Garden Wing နှင့် Inya Wing အမည်ရှိအဆောက်အ ဦး နှစ်ခုပါဝင်သည်။
ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်
Flymya သည်ခရီးသွားနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်း ၃၀၀ ကျော်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားနေသောနည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်ပရီမီယံရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း အဖြစ် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Vivendi SA မှပိုင်ဆိုင်သည့် Canal Group မှ လုပ်ကိုင်နေသည်။
နိုင်ငံတကာ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဖက်ရှင်အ၀တ်အထည်များ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ ကင်မရာ၊မိုဘိုင်းလ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကို ၁၅ နှစ်ကာလအတွင်း ဦးဆောင်နေသောကုမ္ပဏီအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
ကောင်းမွန်သော အလုပ်ပတ်ဝန်ကျင်ကောင်း ရှိတယ်
အလုပ်လုပ်ချင်စရာကောင်းတဲ့ နေရာဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့ စိတ်ရှိကြတယ်
Sea Lion သည်မြန်မာနိုင်ငံရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဇီဝဆေးပညာ၊ သိပ္ပံပညာ၊ ပညာရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကို ဦး ဆောင်သူဖြစ်သည်။
နွေးထွေးမှုနဲ့မိသားစုပုံစံလုပ်ငန်းခွင်ကြောင့် အလုပ်မှာ နေရတာ အလွန်ပျော်တယ်။
လိုအပ်နေသော အထောက်အပံ့များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း ကြောင့် လက်ရှိအလုပ်ရှင်၏တန်ဖိုးကို ကျွန်တော်အလုပ်မှာ ပျော်တယ်။
မြန်မာပြည်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်နေထိုင်မှုပုံစံနှင့်ဗဟုသုတများရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်မှာ လာလုပ်ပါ
Myanmar Information Technology (MIT) ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အိုင်စီတီမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
METRO Wholesale မြန်မာသည် နိုင်ငံတကာ တွင် ဦးဆောင်နေသော ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးနှင့် အစားအသောက်အထူးပြု လုပ်ငန်းဖြစ်သော METRO Cash & Carry ၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
Manulife သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍရေး ၀န်ဆောင်မှု အုပ်စု ဖြစ်သည်။ လူများကို၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝနေထိုင်ရန်ကူညီသည်။
အလုပ်က စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်
Cycle & Carriage Myanmar သည် Mercedes-Benz နှင့် Mazda ခရီးသည်တင်ကားများနှင့် FUSO မော်တော်ယာဉ်များကိုဖြန့်ချိလျက်ရှိသည်။
A 1 ကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ၁၉၉၀ တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။
Suntac Technologies ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်ဆန်သောနည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ပြည့်စုံသော ၀န်ဆောင်မှုများပေးရန်ဖြစ်သည်။
COVID ကာလအတွင်း ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကနေပဲ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အပြင် လစာလည်း အပြည့်ရတယ်
ကျွနုပ်တို့ ၀န်ဆောင်မှုပေးရာတွင် အမြဲတမ်းစိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့်လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အာရှဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှု၏အယူအဆကိုရှေ့ ဦးစွာ မြို့ပြရှုခင်းကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့ပြီးလူအများနှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်ဆံမှုအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ခဲ့သည်။
​ရေနံ နှင့် သဘာဝဓါတ်​ငွေ့လုပ်ငန်း
Puma စွမ်းအင် လုပ်ငန်း သည်စင်ကာပူပိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလယ်နှင့်အောက်ပိုင်းရေနံကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးအများစုမှာစင်ကာပူ Trafigura နှင့် Aအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ lan Sonaအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ l Group တို့မှပိုင်ဆိုင်သည်။
PEB ကုမ္ပဏီအုပ်စုသည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်အာရှလုပ်ငန်းများစတင်ခဲ့ပြီးအင်ဂျင်နီယာအကြိုအဆောက်အ ဦး နည်းပညာကိုအရှေ့အာရှဒေသသို့ပထမဆုံးသယ်ဆောင်လာသည့်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလုပ်များစွာ ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ နဲ့ အကောင်ထည် ဖော်နိုင်ဖို့ အတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်ရတာအပြင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိဟိုက်ဒရိုကာဘွန်သယံဇာတများကိုအောင်မြင်စွာရှာဖွေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရာတွင် MPRL အဓိကအခန်းကဏ္ဍ နေရာတွင် ပါ ၀ င်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် လက်ရှိအရည်အချင်းများအပြင် အရည်အချင်းအသစ်များ နှင့် ပြည့်ဝစေရေးအတွက် သင်ကြားရေးနှင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား အောင်မြင်စွာ ဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (JICA) သည် ၄င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုကွင်းဆင်းချဉ်းကပ်မှု၊ လူသားလုံခြုံရေးနှင့်ထိရောက်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုနှင့် မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
EY သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Deloitte, KPMG နှင့် PricewaterhouseCoopers တို့နှင့်အတူ၎င်းသည် Big Four စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရစ်ယာန်ကယ်ဆယ်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဆင်းရဲမှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ တရားမျှတမှု ၊ မတူညီသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ လူမျိုး၊ မျိုးနွယ်စု နှင့် ကျားမလူမှုရေးရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ကူညီလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင် ရှိတယ်
Shwe Than Lwin Holding Company Limited
ရွှေသံလွင်ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှု၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာ ထိန်းသိမ်းမှု ၊ လူမှုတာဝန်သိမှုနှင့် မတူကွဲပြားသော ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်းများကို စံထား လပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်တိုင်းက သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ဂရုစိုက်တယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ် ရာထူးဆက်ခံနိုင်ဖို့ သေချာ စီမံထားတယ်။
ပထမဆုံး Nissan 3S Showroom ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ရန်ကုန် ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့အထိ Nissan သည်ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းနှင့်နေပြည်တော်ရှိအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | ၀ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များ | လုံခြုံရေးမူ၀ါဒ | အလုပ်ခေါ်ယူသည့်ကုမ္ပဏီများ | ၀ီဂစ်
© MyJobs 2022. မှမူပိုင်ခွင့်အားလုံးပိုင်ဆိုင်သည်။.